Sunday September 22, 2019 - 07:53:49 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Weerarkan oo ahaa mid abaabulan ayaa ku bilowday camaliyad Istish-haadi ah oo lagu dhuftay xerada kadibna ciidamo hubeysan oo infantary ah ayaa u daatay xerada kuwaas oo cagta mariyay maleeshiyaatkii ka badbaaday qaraxa xasuuq ba'ana u geystay.
Saraakiil ka tirsan Xarakada Al-Shabaab ayaa Idaacadda Andalus u sheegay in ciidankoodu ay si buuxda ula wareegeen saldhigga islamarkaana ay halkaas ku dileen askar fara badan.
"Allaah fadligii si buuxda ayaan gacanta ugu dhignay xerada waxaana hadda gudaha xerada daadsan meydadka askartii cadowga iyo gaadiidkii ay ka carareen" ayuu yiri sarkaal ka tirsan Al Shabaab oo la hadlay Idaacada Andalus.
Saraakiisha ayaa sidoo kale sheegay in ay gacanta ku dhigeen gaadiid dagaal iyo kuwa xamuul ah oo tiradooda gaarayaan illaa 6 gaari kuwaas oo qaarkood ay ku rakibnaayeen qoryaha culus ee lidka diyaaradaha.
Wararka qaar ayaa sheegaya in askar fara badan ay ka firxadeen xerada kuwaas oo iyagoo caga cad naftooda la baxsaday balse ciidamada Al Shabaab ayaa weli wada howlgallo ay ku baacsanayaan firxadka maleeshiyaatka.
Saldhigga la weeraray ayaa u dhexeeya deegaannada Dhanaane iyo No.60 wuxuuna ahaa talis muhiim ah oo laga hago dhaq-dhaqaaqyada ciidan ee maleeshiyaadka dowladda ay ka wadaan Sh/hoose.